Mobile Casino Free Bonus | Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah |
Home » Phone Casino Bonus » Mobile Casino Free Bonus | Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah
Eeg Mobile Roulette, Slots and Other Casino No Deposit Required Offer Here!
Casino Phone iyo Online Home Bonus
Tani Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah xukuma habka MobileCasinoFreeBonus.com ururiya, isticmaalka, haysaa iyo macluumaadka laga soo ururiyey users (kasta, a “User”) oo ka mid ah http://www.mobilecasinofreebonus.com website (“Site”). Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah Tani waxay khusaysaa Site iyo dhammaan alaabta iyo adeegyada ay bixiyaan Mobile Casino Bonus Free .com.
Waxaa laga yaabaa inaan macluumaad ka soo ururiyaan aqoonsiga shakhsiyeed ka Users in siyaabo kala duwan ee la xidhiidha hawlaha, adeegyada, qaababka ama khayraadka waxaan ka dhigi laga heli karaa boggayaga Site. Users waxaa lagaa codsan karaa, sida ku haboon, magaca, lambarka taleefanka. Users laga yaabaa in, Si kastaba ha ahaatee, booqo Site qarsoodi ah. Waxaan soo ururin doonaa macluumaadka aqoonsiga shakhsiga ah laga Users oo keliya haddii ay si iskood ah ay soo gudbiyaan macluumaadka sida noo. Users mar walba diidi karaa in shaqsi ahaan bixiya macluumaadka aqoonsiga, marka laga reebo in looga hortago laga yaabaa in ku lug yeeshay hawlo la xiriira Site gaar ah.
Waxaa laga yaabaa inaan macluumaad ka soo ururiyaan aqoonsiga non-shakhsi ah oo ku saabsan Users mar kasta oo ay ula falgalaan noo Site. Macluumaadka aqoonsi Non-shakhsi ka mid noqon kara magaca browser ah, nooca computer iyo warbixin farsamo ee ku saabsan Users waxay ka dhigan tahay oo ah ku xidhnaanta noo Site, sida nidaamka qalliinka iyo kuwa bixiya adeegyada Internet faa'iideysan iyo macluumaadka kale ee la mid ah.
Our Site isticmaali kartaa “cookies” si kor loogu qaado waayo-aragnimo User. Web browser User ee meelaha cookies ay ku drive adag ujeedooyin diiwaan-galinta iyo mararka qaarkood si ay ula socdaan macluumaadka iyaga ku saabsan. User waxay dooran karaan inay dhigay web browser ay leedahay inaad diido cookies, ama inay kugu baraarujiyaan markii cookies ayaa lagu soo diray. Haddii ay sidaas sameeyaan, ogow in qaybo ka mid ah Site ayaa laga yaabaa in aan sii fiican u shaqeyo.
MobileCasinoFreeBonus.com ururiyaan laga yaabaa oo ay isticmaalaan Users macluumaadka shakhsi ahaaneed ee ujeeddooyinka soo socda:
– Si loo hagaajiyo adeegga macaamiisha
Macluumaadka aad bixiso naga caawisaa jawaabi doonaa codsiyada adeegga macaamiisha iyo baahida taageero dheeraad ah si hufan.
– Si shakhsiyeeyo aragnimo user
– Si loo hagaajiyo our Site
Waxaan u isticmaali-celin aad bixiso si loo hagaajiyo alaabta iyo adeegyadayada.
– Si aad u shaqeeyo habka lacag bixinta
Waxaan u isticmaali karnaa macluumaadka ku Users siiyaan naftooda ku saabsan marka amar kaliya si ay u bixiyaan adeeg si. Annagu ma macluumaadkan la wadaagi dhinacyada ka baxsan laga reebo inta lagama maarmaanka ah si ay u bixiyaan adeega.
– Si aad u ordi dalacaad, tartanka, baadhitaan ama muujinta kale Site
Si aad u soo dirta warbixin Users ay isku raaceen si ay u helaan oo ku saabsan mawduucyada aan qabaa noqon doonaa oo xiiso iyaga.
Waxaan anfaco ururinta xogta ku haboon, kaydinta iyo processing dhaqanka iyo tallaabooyin ammaan si aan difaaco haysani, Ebana, siidaynta ama burburinta macluumaadkaaga shakhsiyeed, username, password, macluumaadka macaamilka iyo xogta lagu kaydiyaa on our Site.
Our Site waa iyadoo raacaysa xeerarka nuglaanta PCI si loo abuuro sida aamin ah deegaan inta suurtagal ah si Users.
Annagu ma iibiso, ganacsiga, ama Users kirada macluumaadka aqoonsi shakhsi dadka kale. Waxaa laga yaabaa inaan la wadaagno xogta dadka iskudarka generic aan lala in macluumaad kasta oo aqoonsiga shakhsiga ah ee ku saabsan booqashada iyo users la-hawlgalayaal ganacsi, taabacsan aamino oo xayeysiiya ujeedooyin kor ku xusan.
websites Xisbiga Saddexaad
Users ka heli kartaa advertising ama waxyaalaha kale ee ku noo Site that link to goobaha iyo adeegyada ee la-hawlgalayaasha our, qeybiyeyaasha, xayeysiiya, kafaala, fasaxa siisay iyo qaybaha kale ee saddexaad. Annagu ma xakameeyo nuxurka ama links oo ka soo baxa goobahan oo mas'uul ka yihiin falalka u shaqeeya websites ku xiran ama ka our Site ma aha. Intaa waxaa dheer, goobahan ama adeegyada, oo ay ku jiraan tusmada iyo links, waxaa laga yaabaa in si joogto ah la beddelo. Sites iyo Adeegyadan waxaa laga yaabaa in siyaasadaha ay gaarka ah u gaar ah iyo siyaasado adeegga macaamiisha. Tirtir iyo dhexgalka on website kasta oo kale oo, oo ay ku jiraan website-kaas oo ay leeyihiin xiriir ah in ay naga Site, ku xiran yahay shuruudaha iyo siyaasado gaar ah website in ee.
Ads muuqday on our site laga yaabaa in loo dhiibaa Users ay wada-hawlgalayaashu advertising, kuwaas oo laga yaabaa cookies. cookies waxay u saamixi server ad u ah in la aqoonsado your computer mar kasta oo ay kuu soo diri xayeesiin online inay isku ururiso macluumaadka aqoonsiga shakhsiga ah aan adiga ama dadka kale ee ay isticmaalaan your computer ku saabsan. Macluumaad Tani waxay u ogolaaneysaa shabakadaha ad si, iyo waxyaabo kale, samatabbixin Xayeysiinta la doonayey in ay rumaysan yihiin noqon doonaa oo xiiso ugu inaad. Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah Tani ma dabooli isticmaalka cookies by xayeysiiya kasta.
Compliance leh fal ilaalinta gaarka ah online carruurta
Ilaalinta arimahaaga gaarka ah ee aad u yar yar si gaar ah muhiim. Sababtaa awgeed, waxaan marnaba u ururiyaan ama ay u ilaaliyaan macluumaadka at our Site ka mid ah kuwa si dhab ah, waxaynu og nahay hoos jira 18, iyo mid ma our website waxa uu u qaabsan in uu soo jiito qof ka yar 18.
MobileCasinoFreeBonus.com ikhtiyaar u leeyahay in lagu casriyeeyo siyaasadda gaarka ah waqti kasta. Marka aynu sameyno, waxaan dib ugu doonaa taariikhda updated hoose ee boggan. Waxaan dhiiri Users in si joogto ah loo hubiyo this page wixii isbeddello ah inuu sii joogo xog ku saabsan sida aan u caawiyo si ay u ilaaliyaan macluumaad shakhsiyeed oo aan u ururiyaan. Waxaad qiraysaa iyo heshiiyaan in ay tahay masuuliyadaada in dib loo eego Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah tan iyo xilliyo ka warqabto beddelka.
Haddii aad qabto wax su'aalo ah oo ku saabsan Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah this, dhaqanka this site, ama marka aad la dhaqmayso this site, fadlan nagala soo xidhiidh:
Qoraalkan waxa markii ugu dambaysay updated on March 24, 2014